DAAWO:-Deni Oou hanjabay ganacsatada | Wardoon
Home Somali News DAAWO:-Deni Oou hanjabay ganacsatada
DAAWO:-Deni Oou hanjabay ganacsatada
Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni, ayaa maanta kulan la qaatay ganacsatada heerarkeeda kala duwan, waxgaradka iyo qeybaha kala duwan ee Bulshada Puntland.
Madaxweynaha oo hadal u jeediyay Bulshada ayaa aad u faahfaahiyey arrimaha la xiriira sicirka sarifka , cabashooyinka dowladda soo gaaray iyo go’aamada ay kasoo saartay dowladdu oo waxbadan xaaladda dejiyay.
Wuxuu Madaxweynuhu bulshada la wadaagay in Maamulka go’aamiyay in Bangiga Dowladda, kuwa gaarka loo leeyahay iyo Shirkaddaha xawaaladaha la faray inay sameeyaan qeyb sarifta lacagaha.
“Laga billaabo berito Bangiga Dowladda waxaan farayaa inuu Sarifo Doolarka, si dadka Shillin Soomaaliga u haysta uu doolar u siiyo, kuwa Doolarka watana uu Soomaali ugu bedelo, Bangiyada kale ee gaarka loo leeyahay iyo shirkaddaha xawaaladaha iyagana waxaan faraynaa inay qeyb sarif sidaasi oo kale sameeyaan”.
Sicirka sarifka iyo wadashaqeynta Bangiyada waxaa si dhow ula soconaya Hay’addaha ku shaqo leh oo Bangiga Dowladda iyo Wasaaradda Maaliyadda u horeeyaan” Ayuu yiri Madaxweynaha Dowladda Puntland.
Ganacsatada iyo bulshada kale ee kulanka ka qeybgalay ayaa aad usoo dhoweeyay go’aanka, Madaxweynaha iyagoo uga mahadceliyay dadaalka dowladdu ku bixisay inay wax ka qabato cabashada la xiriirta sicirka sarifka lacagaha.
Previous articleCiidanka Galmudug Oo Gacanta Ku Dhigay Rag Maanta Dil Geystay
Next articleCiidanka Itoobiya oo dilay shaqaale ka tirsanaa Qarramada Midoobey
Argagax ka taagan Maraykanka & dhimashada oo tiro beeshay +SAWIRRO
Gudoomiye Gaatamow oo caawa lagu dilay Afgooye